Taliyaha Ciidanka Xoogga Somalia oo sheegay inuusan waxba ka ogayn Weerarkii lagu laayay Dad Shacab ah Deegaanka Bariire ee Shabeelaha Hoose. – Hornafrik Media Network
By HornAfrik	 Last updated Aug 25, 2017
Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed, Gen Axmad Cirfiid oo la hadlay HornAfrik ayaa sheegay inuusan waxba ka ogayn Weerarkii Bariire ee lagu laayay Dadka Shacabka ah, Wuxuuna sheegay in Magaciisa lagu been abuurtay Warsaxaafadeed ay soo saartay Wasaaradda Warfaafinta oo lagu sheegay in Taliyaha Xoogga uu wax ka ogaa Weerarkaasi.
Gen Cirfiid waxa uu qiray in Dadka lagu xasuuqay Weerarkaasi inay ahaayeen Dad Shacab ah, Isla markaana ay Dowladda Somalia u saartay Guddi soo baara sidii ay wax u dhaceen, Wuxuuna muujiyay sida Talis ahaan ay uga danqadeen Ficilkaasi foosha xun ee lagu xasuuqay Beeraleey iska dhex joogay Beertooda.
“Waxaa la laayay Caruur, Dad Waayeel ah iyo Shacab aan Dagaal ku jirin, Waanan ka xunahay wixii dhacay, Waana la baarayaa, ” sidaana waxaa yiri Taliyaha Xoogga.
Taliye Cirfiid waxa uu ballan qaaday inuu si faah faahsan Dhacdadan uga hadli doono Bari Insha Allaah. Waxaana uu Tacis u diray Eheladda Dadkii dhintay.
Ciidamadda xasuuqay Shacaka Beeralayda ah ayaa isugu jiray Ciidamo Soomaali ah iyo Maraykan. Waxaana Weerarkaasi ku dhintay 10 Qof oo Rayid ah.
Dawladda Somalia ayaa ku jahwareertay siday Xaaladan u wajahayso, Waxayna Madaxda Dowladda Somalia soo saareen Warsaxaafadeedyo is burinaya Saacado gudahood, iyagoo qoraalo kala duwan oo ay ku soo qoreen Baraha Bulshadda ay ka saareen.
Nin Soomaali ah oo Caawa weerar ka gaystay Brussels.